We She Me: သားလေး ဖွားစဉ်က (၂)
မဇနိ - 6/1/08, 2:18 AM
google reader ကနေ ချောင်းရတာလဲ မောနေတာပါပဲဗျာ။ ဒီနေ့ အစောပိုင်းကပဲ
အစ်မနဲ့ ကလေး(၂)ယောက်ကို လှည်းလေးနဲ့တွေ့ရလို့ အံ့သြနေတာဗျ။ တပတ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ် အစ်မက အတော် သတ္တိကောင်းတယ်ဆိုပြီး အံ့သြနေတာ။ အခု ကိုအန်ဒီ့စာဖတ်ရတော့ အစောက အံ့သြတာတွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိတော့ဘူး။ အစ်မက အတော်ကို စိတ်ဆောင်တယ်နော်။ ကိုအန်ဒီတို့ စာရေးကောင်းတာတော့ ဇာတ်ရှိန်ကောင်းနေတုန်း ဆက်ရန်နဲ့ ရပ်သွားတယ်။ “ဟင်း….“နဲ့ပဲ နောက်စောင့်ဖတ်ရမှာပေါ့ဗျာ။ ဘာတတ်နိုင်တာမှတ်လို့နော်။ မိသားစုလက်တွေနဲ့ ဓါတ်ပုံမြင်ရတဲ့အခါ နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုလေးပါလားဆိုပြီး ကြည်နူးအားကျမိပါတယ်။ စိတ်ကူးကောင်းလိုက်တာလို့ သဘောကျမိပါတယ်။ မအားတဲ့ကြားက ဗဟုသုတတွေပြောပေးတဲ့ အစ်မနဲ့ စာရေးပေးတဲ့ ကိုအန်ဒီကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဆက်ရန်ကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
စစ်ကိုင်းသူ - 6/1/08, 4:12 AM
ဟုတ်ပါ့ မဇနိပြောသလိုပါပဲ တစ်ချိန်လုံး WeSheMe ကို လာကြည့်နေရတာ။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ကို ဘယ်နှစ်ခေါက်မှန်းတော့ မသိတော့ဘူး။ တစ်ခါတလေ တစ်ချိန်လုံး ဖွင့်ထားပြီး၊ စာကြည့်ရင်း သတိရတိုင်း ကြည့်နေရတာ။ ကိုအန်ဒီ ကံကောင်းတယ်။ အစ်မက အရမ်း သတ္တိကောင်းတာပဲ။ တချို့တွေများ အဲလို အခြေအနေဆို ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘဲ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ဖြစ်နေပြီ။ ညည်းက ညည်းသေး။ ကြောက်တာရော၊ ယောက်ျားကို ချွဲချင်တာလဲ ပါချင်ပါမှာပေါ့လေ။ ယောက်ျားလုပ်သူခမျာလဲ မိန်းမက အဲလိုဖြစ်နေတော့ ပျာယာခတ်ပြီး ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိပေါ့။ အစ်မသာ အဲလိုဖြစ်နေလို့ကတော့ လေဆိပ်ပဲ သွားကြိုရတော့ မလိုလို၊ မသွားဘဲ ဆေးရုံပဲ ချက်ချင်းတန်းပြေးရတော့ မလိုလိုနဲ့ ပျာယာခတ်နေရမှာ။ ကျေးဇူးတင်ရမယ်နော။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုကို အားကျသော်ငြားလဲ အားကျရုံမှ တပါး မဇနိတို့လို နောင်တစ်ချိန် ကိုယ်တိုင်ကြုံဖို့ကတော့ xxxxxxxxxxxx :)
War War - 6/1/08, 1:01 PM
Aung Ma Lay.. Ma MMS that ti ka tot ant ma khan par pe.. taw thay tal naw. lay sate hmar ma mway thwar loet..
Anonymous - 6/1/08, 2:58 PM
Waiting to read part 3. Bravo to she, so brave :)
Aung Myo Htet - 6/1/08, 6:03 PM
wasn't thatabit too much detail. I am not sure you should present that much on the public blog. but I do understand your blog is your decision. lay sar par te`.
Andy Myint - 6/2/08, 2:30 PM
သမီးမွေးတုန်းကလည်း အဲဒီလိုပဲ လက်ကလေးတွေကို ရိုက်ဖူးတယ်လေ မဇနိ။ သူတို့ လက်သေးသေးလေးတွေက ဘယ်လို ချစ်စရာကောင်းကြောင်း ကြီးပြင်းလာအောင် ဘယ်လို ပြုစုပျိုးထောင်းရမယ် ဆိုတာကို ရည်ရွယ်ပြီ ရိုက်တာပါ။ တကယ်ဆို လက်ဖ၀ါး၊ ခြေဖ၀ါးတွေကို ပုံစံလောင်းထားလို့ ရတယ်။ ပိုက်ဆံ အပိုကုန်မှာ စိုးလို့ မလုပ်ဖြစ်တာနဲ့ ဓါတ်ပုံပဲ ရိုက်ထားတာ။
သူမက စိတ်လည်းဆောင်၊ ကျွန်တော်ကလည်း အစိုးရိမ် မကြီးလွန်းတာပါ မစစ်ကိုင်းသူ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တော့ နာကျင်တာ ခံစားရတာ ဘယ်တူနိုင်မလဲ။ အခုဟာက ဒုတိယ သားလည်းဖြစ် အရမ်းလည်း မနာလို့ပါ။ နှစ်ယောက်စလုံး ကံကောင်းတယ် ပြောရမယ်။
တော်သေးတယ် ၀ါဝါရေ.. ရထားပေါ်မှာတို့ လေဆိပ်မှာတို့ တက္ကစီပေါ်မှာတို့ မမွေးလို့။
Thanks, Reader. Cheers :)
Thanks for your concern, AMH. Most are more interested if presented in detail, I presumed. :)